E-News Nepali || Fast and Accuracy » कालापानी र लिपुलेकको नेपालसँग कुनै प्रमाण छैन गफ गरेर मात्रै हुँदैन
कालापानी र लिपुलेकको नेपालसँग कुनै प्रमाण छैन गफ गरेर मात्रै हुँदैन
काठमाडौ। नेपालका चर्तित तथा बरिस्ठ पत्रकार ऋषि धमला ले आज युटुब मार्फत भनेका छन । नमस्कार दर्सक आजको जनता जान्न चाहान्छन कार्यक्रम हामी समग्र देशमा नेपालको सिमाना बारेमा नेपालको सिमाना भारत र चीन सँग जोडिएको छ ।
भारत सँग तीन तिर अनि चीन सँग एक तिर नेपालको सिमानाको कुरा गर्दा खेरी साँच्चिकै अहिलेको अबस्ता को कुरा गर्दा खेरी हाम्रो देशको कुरा गर्दा खेरी मेची देखि महाकाली सम्मको कुरा गर्दा खेरी साँच्चिकै भारत सँग बिबाद गर्दा खेरी कहाँ कहाँ बिबाद छ त ?
सुस्ता देखि लिपुलेखको कुरा आईरहदा खेरी कलापानी पछिल्लो समय सबैको मुख मुखमा एतिखेर कालापानी किन ? नेपाली भुमीमा भारती नक्सामा कसरी आयो ? के कारण ले आयो ? कालापानी को अब समाया कसरी समाधान होला ?
सबैको ध्यान तेता तिर केन्द्रीत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले सबैको समर्थन जुटाउनको लागि साँच्चिकै सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ । सबै पोल्टिगल पाटीको देशको नागरीकको सबै तर तर्काको समर्थन प्रधान मन्त्रीलाई छ ।
अब प्रधानमन्त्रीले भारत सँग कसरी डिल गर्नुहोला त ? कुटनिती माध्यम बाट यो समस्या कसरी समाधान होला त ? भारतिय प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री बिचमा कहिलेसम्म सम्बात होला त ? कहिले कुराकानी होला त ? सबैको ध्यान तेता तिर केन्द्रित भएको छ ।
आजको कार्यक्रममा हामी सरकारको प्रवक्ता कुलप्रसाद बास्कोटा सँगको बिशेश कुराकानी तपाईंहरु सबलाई थाहा छ । उहाँले के भन्नुभयो ? अहिलेको अवस्थाको बारेमा सरकारको दृस्ठिकोण के छ ? र प्रधानमन्त्री को स्वाथ्य के छ ? हेर्नुहोस भिडियो:
प्रकाशित मिति २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०३:१०